Fitokanana fotodrafitrasa ao amin'ny Ivotoerana Malagasy momba ny Vaksiny Veterinera na ny « Institut Malgache des Vaccins Vétérinaires » (IMVAVET) | Primature
Fitokanana fotodrafitrasa ao amin’ny Ivotoerana Malagasy momba ny Vaksiny Veterinera na ny « Institut Malgache des Vaccins Vétérinaires » (IMVAVET)
Antananarivo, 28 febroary 2018- Nahazo fotodrafitrasa vaovao hanaovana asa fikarohana sy fitsirihana ny kalitaon’ny vaksiny, ny Ivotoerana Malagasy momba ny Vaksiny Veterinera (IMVAVET/Institut Malgache des Vaccins Vétérinaires) eny Ampandrianomby/Antananarivo. Nitokana izany tamin’ny fomba ofisialy ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Nasongadin’ny Lehiben’ny governemanta tamin’ny lahateniny fa na ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, na ny tenany dia samy resy lahatra fa manana ny lanjany eo amin’ny fampandrosoana ny firenena ny seha-pikarohana satria natao hanasoavana ny mpiara-belona. Ankoatr’izay, dia tafiditra amin’ny ezaka fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny fahavitan’ity Foibe (laboratoire) ity indrindra eo amin’ny sehatry ny fiompiana ; “matoa mandroso ny firenena iray dia hainy ny mampiasa sy mampihàtra ny vokatry ny fikarohana. Voaporofo androany ny maha-zavadehibe ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra araka ny voarakitra ao amin’ny PND sy nohamafisin’ny Vina Fisandratana 2030 » hoy ny Praiminisitra.
Asa fikarohana sy fitsirihana ny kalitaon’ny vaksiny ho an’ny biby fiompy no antony nananganana ny fotodrafitrasa, koa nohararaotin’ny Lehiben’ny governemanta ny niresaka manokana momba ny omby eto amintsika izay miha lany tamingana ankehitriny. Ankoatry ny antony hafa dia nosoritany fa ny tsy fandriampahalemana eny ambanivohitra no anisany mampihena ny isan’ny omby ; koa nambarany fa hisy ny fampiantsoana ireo tomponandraikitra ambony voakasiky ny resaka fitandroana ny fiaminana amin’ny herinandro ho avy izao : « Raisiko ny andraikitra amin’ny maha mpiantoka ny filaminana, ny fandriampahalemana ahy araka ny andininy faha-65 ao amin’ny Lalàmpanorenana ».
Anisan’ireo tomponandraikitra voakasiky ny resaka momba ny omby any ifotony, araka ny nambaran’ny Praiminisitra, ireo tomponandraikitra amin’ny lafintany, ny tomponandraikitry ny fitsarana ary ny mpitandro filaminana. Nilaza ny Lehiben’ny governemanta fa mbola misy ny famotsiana omby (fanadiovana omby halatra) amin’ny alalan’ny FIB ataon’ny tomponandraikitra sasany, ahitana taratasy tsy ara-dalàna koa indraindray ny fitaterana ireny
omby ireny ary tsapa koa indraindray ny fisian’ny goragora amin’ny tontolon’ny fitsarana : « raha mirindra tsara ny fiaraha-miasan’ny samy tomponandraikitra, raha samy mandray ny andraikitra tandrify azy avy ny tsirairay eny ifotony dia ho voavaha ny olan’ny tsy fandriampahalemana. Misy ireo tena manao ny asany an-kitsipo fa misy koa ireo tsy manatanteraka ny asany. Efa nisy ny sazy nomena ireo tomponandraikitra tsy nahefa ny asany araka ny tokony ho izy, ary hohamafisina amin’ny alalan’ny fanaraha-maso hentitra ny fijerena ireo minia tsy manatanteraka ny adidiny ».
Mahakasika manokana ny tontolon’ny fitsaboana biby sy ny fiompiana, dia fotoana izao hoy ny Praiminisitra hanomezana lanja bebe kokoa sy hamerenana ny hasin’ny Mpitsabo biby eto Madagasikara. Ilaina koa hoy izy, ny fanomezana fiofanana ho an’ny tantsaha mpiompy mba hahatonga azy ireny ho matihanina amin’ny asany satria ny Fiompiana, ny Fambolena ary ny Jono dia miantoka ny fampiroboroboana sy fanarenana ny toekarena eto Madagasikara.
Marihina fa nanotrona ny Lehiben’ny goveremanta tamin’izao lanonam-pitokanana teny amin’ny IMVAVET/Ampandrianomby izao ny Minisitry ny Fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny Sekreteram-panjakana eo anivon’ny ministeran’ny raharaham-bahiny misahana ny fifandraisana sy ny fampandrosoana, ireo mpiara-miombon’antoka nahitana ny solontena maharitry ny FAO eto amintsika sy ny filohan’ny Tranoben’ny Varotra Madagasikara-Corrée ary ny fianakaviam-ben’ny IMVAVET.
Fanazavana entin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier mahakasika ny didim-panjakana nivoaka tamin’ny Filan-kevitry ny Minisitra amin’ny fanatsarana ny tambin-karaman’ireo tomponandraikitra eo anivon’ny kaominina eto Madagasikara →